Saamaynta ay Rabshadaha guryaha ka dhaca ay ku yeeshan Haweenka iyo Caruurta. – WORDA
Blog Events Saamaynta ay Rabshadaha guryaha ka dhaca ay ku yeeshan Haweenka iyo Caruurta.
Badanaa, haweenku waxay isticmaalan hab ay ula qabsadaan dhibaatadooyinka qoyskooda dhacda, iygaa oo ku jiraa xidhidh aad u dhiban kuwaas oo ay ku tageerayaan qoyskoodu, halkaa dumarka qaarkooda ay go’aansadaan inay dalbadaan furin, laakiin marmarka qaarkooda tani waxay u keenaysa dhibaato badan oo ku dhacda caruurtooda. Waxay kale oo ay go;aansadaan inay xidhiidhkaas adag ay ku nooladaan si ay u ilaashadaan caruurtooda. Sidoo kale haweenka dhibkaas ku dhacay waxay noqdaan qaar la macaamila dabeecadaha ay leyihiin lamanahodu. Haweenka qaar waxay leyihin kooxo haweena oo ka tageera dhibaatada ku dhacday qoskeeda, iyaga oo ka caawinayaa shaqadda guiga, waxayna ku dhiri galiyaan inay bartaan caafimaadka iyo sidaa ay u kobcin lahayeen gaaradka caruurtoda.
PreviousOrigin of FGM in Somali Culture and Islamic Perspectives